Ederede David Blume na Martech Zone |
Edemede site na David Blume
David bụ onye isi oche nke Strategic Alliances maka Qvidian, na-ahụ maka ijikwa mbanye na uto nke ndị mmekọ ụlọ ọrụ ahụ. David ọkachamara na ngalaba nke ire ere na mpaghara dịka njikwa ụgwọ na atụmatụ akpaaka.
Gbanwe ire ahịa gị site na ụzọ ọtụtụ ụzọ
Fraịde, Ọktọba 10, 2014 David Blume
Akpọrọ m ka m sonye na mkparịta ụka ụka na nso nso a na Ahịa Ahịa Ahịa Ahịa nke Ahịa na Atlanta. Oge a lekwasịrị anya na Mgbanwe Ahịa, ndị na-ahụ maka ya na-enye echiche na nghọta ha banyere omume kacha mma na ihe ịga nke ọma. Otu n'ime ihe mkparịta ụka mbụ gbara mbọ ịkọwa okwu ahụ n'onwe ya. Gịnị bụ ahịa mgbanwe? A na-ausedụbiga ya oke na ikekwe hyped? Nkwenye zuru oke bụ na, n'adịghị ka ire ahịa ma ọ bụ nkwado,